Hetsiky ny mpanohitra ny fifidianana – Kianjan’ny 13 mey: mpanao politika efa naloam-bahoaka… | NewsMada
Hetsiky ny mpanohitra ny fifidianana – Kianjan’ny 13 mey: mpanao politika efa naloam-bahoaka…
Efa fantatra teo amin’ny nataony sy ny tantarany. Milaza ny hitarika vahoaka etsy amin’ny kianjan’ny 13 mey, rahampitso talata, ireo mitonona ho mpivoy ny fanorenana ifotony (HFI), mitsipaka ny hantanterahana ny fifidianana.
Mpanao politika naloam-bahoaka sy tsy sahy miatrika fifidianana avokoa ny maro amin’izy ireo ary mitady hanao Tetezamita lavareny hatrany amin’ny 18 volana. Hitady seza sy hijapy ny hetsika fitakian’ireo sendikà samihafa amin’izao fotoana izao. Anisan’izany Rakotoniaina Pety sy Razafindravahy Edgard na ry Razafindrakoto Harison… Zara fa nahazo 0,..% tamin’ny fifidianana filoham-pirenena natrehin’izy ireo.
Mpikarama an’adin’ny HVM notambazana vola…
Tsy vitan’izany fa manana raharaha maloto amin’ny asan-dahalo sy ny halatr’omby any amin’ny faritra niaviany ny PDS Rakotoniaina Pety. Teo koa ny fanamparam-pahefana nataony fony izy ben’ny Tanàna tao Fianarantsoa tamin’ny fotoan’androny. Samy mpiray tendro amin’ny HVM avokoa izy ireo ary mpikarama an’ady, notambazana vola tsy handehanantsika any amin’ny fifidianana ka izao miketrika fanakorontanana izao.
Tsy ho azony amin’izany ny vahoakan’Antananarivo efa leo ny fitaka sy ny lainga ataon’ny mpanao politika tahaka azy ireo. Aoka tsy hopotehina sy hatao sorona ny tanàna sy ny vahoaka eto an-dRenivohitra. Hafa ny hetsika ho an’ny fanovana notarihin’ny depiote teny amin’ny kianjan’ny 13 mey ireny.
Manolotra kandidà hifampitady any amin’ny fifidianana
Ny zava-misy, efa miroso ny dingana ho any amin’ny fifidianana. Tafiditra ao anatin’izany ny fametrahana fitoniana sy filaminana. Manao ny ezaka rehetra ny governemanta amin’ny alalan’ny Praiminisitra Ntsay Christian, amin’ny hiatrehana izany. Mitady ny vahaolana rehetra koa eo amin’ny fitakiana sendikàly. Efa maika amin’ny fifidianana ny rehetra izao. Raha milaza ho tsy matahotra fifidianana izy ireo, tokony hifidy kandidà tokana hitondra ny fanevan’izany fanorenana ifotony izany. Avelao hotsarain’ny vahoaka ny vinam-piarahamonin’ny kandidà tsirairay avy amin’ny fifidianana. Mifampitady any amin’ny fifidianana…
Tsy hanaiky horebirebena ny vahoakan’Antananarivo…
Tsy mazava rahateo ny tian’ireto HFI ireto hahatongavana. Fandrebirebena vahoaka fotsiny ary ataon’ny fitondrana HVM fitaovana hisakanana ny fifidianana fotsiny ihany. Mahay manavaka ny vary sy ny tsiparifary anefa ny vahoakan’Antananarivo ka tsy hofitahina tahaka izany…